Sarudza saizi yekuchinjanisa chikamu paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | Sisitimu Yekutonga, GNU/Linux
Chinja kupatsanura pane hard drive rakagovaniswa pakati peWindows neUbuntu.
Kana iwe wave uchiisa Linux kwemakore, iwe ungangoita maitiro acho nenzira. Zvimwe zvinhu zvaunoramba uchiita zvinogona kunge zvisiri izvo.
Semuenzaniso, saizi iwe yaunofunga iyo yekuchinjanisa chikamu chinofanira kuve nacho
1 Chii chinonzi Linux chinoshandisa chinjana kana chinjana chikamu?
2 Criteria yekuziva kana isu tichifanira kugadzira swap kupatsanura.
3 Nzira dzekuona saizi chaiyo yeshanduko yekuchinjanisa.
4 Chinjana mafaera
Chii chinonzi Linux chinoshandisa chinjana kana chinjana chikamu?
Iyo data uye zvirongwa zviri kuitwa zvinochengetwa mune inonzi Random Access Memory kana Ram. Izvo zvakachengetwa mu RAM ndangariro zvinorasika kana iwe wadzima komputa.
Mumazuva ekare, RAM yaidhura. Izvi zvinogumira huwandu hwezvirongwa zvinogona kuitwa panguva imwe chete uye simba ravo. Mhinduro yaive kushandisa diski nzvimbo kusunungura iyo data iyo yanga isingadi panguva ino.
Tinodaidza chinjanai chikamu a nzvimbo yeiyo hard drive iyo yekushandisa sisitimu inoshandisa yekuchengetedza kwenguva pfupi. Yakashandiswa kana pasina nzvimbo yakakwana mu RAM kuchengetedza data reiyo inoshanda application.
Kuwana ruzivo rwakanyorerwa kuchinjanisa chikamu kuchanonoka zvakanyanya kupfuura kuwana ruzivo rwakachengetwa mu RAM. Nekudaro, kugoverwa kweLinux yatiri kushandisa kuchasarudza shandisa chinjanai chikamu chekare dhata.
Criteria yekuziva kana isu tichifanira kugadzira swap kupatsanura.
Pamakomputa emazuva ano, kugoverwa kweLinux nekushandisa kwese kunogona kushanda pasina matambudziko nekusaisa chinjanai. Asi pane dzimwe nguva apo kuve nazvo kwakakosha uye kunogarokurudzirwa.
Izvo zvinodikanwa chaizvo kugadzira chinja chikamu uyeMune zviitiko izvi:
Kana timu yedu ine 2GB kana pasi pe RAM. Kunyangwe paine pasina kana desktops kana mabhuku emabhuku akasara neiyi huwandu hwe RAM, zvakajairika mumakomputa ekutanga akagadzirirwa kushanda negore.
Patinoshandisa ndangariro-dzakasimba kunyorera RAM senge vhidhiyo vapepeti.
Kana isu tinoda kugonesa hibernation modhi pakombuta yedu.
Kana Linux yakaiswa pakombuta inoitirwa kushanda negore, chinjo yekuchinjana inofanira kugadzirwa.
Paunenge uine yakakwana RAM ndangariro (Zvinopfuura masere kana gumi nematanhatu GB zvichienderana nerudzi rwezvishandiso zvaunoshandisa) zviri nyore kupa chikamu chedisiki kuchinjana kupatsanura. Izvi zvinobatsira kudzivirira chirongwa chisina kushanda kubva pakupedza ndangariro zhinji kupfuura zvinodikanwa uye nekukiya iyo sisitimu.
Izvi hazvishamise sezvazvinonzwika.
Makore maviri apfuura GNOME 3.26 vashandisi vakataura kuti memory yekushandisa yakawedzera zvakanyanya kana uchichinja pakati windows kana kuwana menyu. Kunyangwe chidzidzo chichigadziriswa, hazvikuvadze kunyeverwa.
Ehezve saizi yedhiraivho rakaomarara raunenge uine chichava chinhu chekufunga nezvacho. Kana iwe ukaisa kugovera kwako kweLinux pane 16GB pendrive, hauzove nezvakawanda sarudzo.
Nzira dzekuona saizi chaiyo yeshanduko yekuchinjanisa.
Sezvo iwe waigona kuona kana iwe ukaisa akasiyana Linux kugoverwa uchishandisa otomatiki yekumisikidza modhi, hapana yunifomu yekuyera kana uchifunga kuti yakawanda sei diski nzvimbo yekupa kune yekuchinjanisa chikamu.
Kana iyo RAM ndangariro yakaenzana kana pasi pe2GB e inopihwal kaviri diski nzvimbo.
Kana iyo RAM ndangariro yakakura kudarika 2 GB uye isingasviki 5 GB sngatitorei 2 gb kune RAM.
When the RAM memory izvo zvatinazvo ndizvo yakakura kupfuura 5 GB isu tinogovera 20% yediski nzvimbo.
Kuti ushandise hibernate modhi pasina matambudziko, saizi yeiyo chinja kupatsanura kunofanirwa kunge kwakaenzana nehukuru hwe RAM pamwe neiyo square square yehukuru hwe RAM.
Ehezve, hapana musanganiswa wehardware uye software iyo yakafanana neimwe. Zvakanakisa kuyedza saizi dzakasiyana dze disk nzvimbo kuti uwane iyo inoshanda zvakanyanya needu RAM uye zvishandiso.
Izvo zvinokwanisika kuti nekuda kwekushomeka kwenzvimbo kana chimwe chikonzero, nzvimbo yemuviri pane yakaoma dhisiki haigone kupihwa senzvimbo yekuchinjana
Muchiitiko ichocho iwe unogona kugadzira faira uye kurimisa sekuchinjanisa. Kana izvi zvaitwa, chinozadzikisa basa chairo rekuchengetedza data risingakoshi iro risina nzvimbo mu RAM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Chinjanai chikamu paLinux. Maitiro ekuona saizi chaiyo
Kujekesa kwazvo, pakupedzisira.
Ndine kusahadzika. Ndine akati wandei madhiraivha akaomarara uye 16 G ye RAM.
Kufarira kwangu kuchinjanisa ndiko kugona kuhwanda.
Ini parizvino ndine mana disks, SSD kwandinayo iyo EFI mugove, iyo / bhuti uye iyo /, uye mamwe ese maHDD. Mune imwe yadzo ndine 4G swap partition asi yangu LinuxMint haivate zvakanaka. Ini ndatevera madhairekitori akati wandei asi ini handina kumbowana.
Zvingave zvichidikanwa kupfuura 20G?
Haisi iyo chaiyo sainzi. Mune dzidziso 20GB inosangana neyekuyeuka + square mudzi wekutonga mutemo. Edza kuchipa 10 gb yakawanda uye kana ichishanda enda pasi.
alex hinostroza akadaro
Kana gondobwe rangu ndangariro riri 8GB ine 2GB yeSWAP zvakaringana, asi kana ndangariro yangu iri 16GB inopetwa, 4, 8,16 nezvimwe- ...
Pindura kuna Alex Hinostroza